Iiraan oo si rasmi ah u shaacisay inay Xuutiyiinta u gudbisey tiknolojiyadda samaynta gantaalaha & daroonnada + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Iiraan oo si rasmi ah u shaacisay inay Xuutiyiinta u gudbisey tiknolojiyadda...
(Tehraan) 24 Sebt 2020 – Afhayeenka Ciidamada Iiraan, Abolfazi Shekarchi, ayaa sheegay in ay tiknolojiyadda ciidamada u gudbiyeen Xuutiyiinta Yaman, si ay u samaystaan gantaalo iyo daroonno ay ku dagaallamaan.
“Gantaalo hadda ma siinno Yaman balse iyaga ayaaba samaysan kara si ay ula dhacaan madaxyada cadowga,” ayuu ku faanay Shekarchi oo la hadlayey TV dalkiisa ah.
Wuxuu intaa daba dhigay in dalkiisu uu taageerayo dadka Yaman iyo cid kasta oo lid ku ah Maraykanka iyo Yuhuudda, isagoo sheegay in duruufta dhaqaale ee dalkiisu aanay saamaxaynin inay wax kasta bilaash ku siiyaan xulufadooda, balse ay Yamani ka iibsato sahayda ciidamada.
“Dadka Yamaniyiintu waa kuwo caqli badan oo leh khubaro waqti yar ku diyaariyey daroonno casri ah.” ayuu yiri, iyadoo ay Maraykanka iyo Sucuudigu marar badan Iiraan ku eedeeyeen inay hubayso Xuutiyiinta Yaman oo Riyaad kula jira dagaal iminka jahawareeray oo 5 sanadood soconaya.
Waxaa daroonnada ay Xuutiyiintu sameeyaan oo ay Iiraan dhanka farsamada ka caawisay ka mid ah Qaasif oo dhowr mar Sucuudiga lagu weeraray.
Previous articleDoollarka oo la sheegay inay dunida is macasalaamayn karaan sanadka soo aaddan ee 2021-ka
Next articleIsrael oo waloow ay Imaaraadka la ”heshiisey” misna Maraykanka ku dirtay (Dayuuradaha F-35 oo loo diiddan yahay & shir dhacay)